कसरी इन्स्टाग्राम स्टोरीहरूमा प्रश्नहरू सोध्ने: इन्स्टाग्राममा के नयाँ छ Androidsis
मानुएल रामीरेज | | एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू, हाम्रो बारेमा, ट्यूटोरियलहरू
स्टिकरहरूको परिचय दिंदा हामी इन्स्टाग्रामको त्यहि महत्त्वपूर्ण समाचारको सामना गरिरहेका छौं Instagram कथाहरूमा प्रश्नहरू सोध्न। सफ्ट इन्टरफेस प्रस्ताव गर्न र प्रयोगकर्ता अनुभवमा केन्द्रितिका लागि लाखौं प्रयोगकर्ताहरूको मनपर्ने बन्न लागेको एक अनुप्रयोग जुन फेसबुकबाट मात्र टाढा छ।
यो समय, अन्य अवसरहरूमा जस्तै, इन्स्टाग्रामले यसलाई आधिकारिक बनाएको छ कथाहरूमा प्रश्न स्टिकरहरूको आगमन। त्यो हो, तपाइँ प्रतिक्रियाहरू पाउनको लागि तपाइँका सम्पर्कहरू र अनुयायीहरूलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ वा केवल एक विशेष शीर्षकमा उनीहरूको राय जान्न सक्नुहुन्छ।
1 इन्स्टाग्रामले ती चाखलाग्दो स्टिकरहरूमध्ये एक थप्छ
2 इन्स्टाग्राम कथाहरूमा कसरी प्रश्नहरू सोध्ने
इन्स्टाग्रामले ती चाखलाग्दो स्टिकरहरूमध्ये एक थप्छ
इन्स्टाग्राम स्टिकरहरूले हामीलाई नयाँ कार्यहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ ती अनुयायीहरूलाई अर्को अनुभव दिन जुन तिनीहरू प्रत्येक अनुसरण गर्छन्। इन्स्टाग्राम कथाहरू तिनीहरू पूर्ण क्रान्ति भएका छन् र सामाजिक नेटवर्क यसलाई राम्ररी जान्दछ, त्यसैले प्रत्येक केहि दिनमा यसले खबर ल्याउँदछ।
यस पटक यो प्रश्नहरू Instagram का कथाहरूमा छ एक नेटवर्क को लागी सबै अग्रणी भूमिका लिने ती कि यी हल्का तापमान संग सबै प्रमुख भूमिका लिन्छ। भेट भए पछि नयाँ इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग IGTV भनिन्छ र यसले हामीलाई सामाजिक नेटवर्कमा दीर्घ-अवधि भिडियोहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
र हैन, तिनीहरू सर्वेक्षण स्टिकर वा ईमोजी स्टिकरहरू छैनन्, जसले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न अनुमति दिन्छ। यहाँ प्रश्नहरू खुला-अन्तमा छन्, जसले यो नयाँ कार्यलाई अन्य पथहरूतर्फ डो leads्याउँछ, जुन धेरैले हाम्रो जीवनमा यस्तो व्यञ्जनको सामाजिक नेटवर्कमा धेरैलाई पर्खिरहेका छन्।
मेरो मतलब, के हामी खुला प्रश्नहरूको बारेमा कुरा गर्छौं केही उत्तरहरूको साथ जुन हामीसँग अनुयायीहरू वा सम्पर्कहरू धेरै लामो हुन सक्छन्। यो माथिको दुई स्टिकर भन्दा भिन्न छ, र इंस्टाग्राम सामाजिक नेटवर्कबाट सम्भावना को एक सम्पूर्ण संसार खुल्छ।
इन्स्टाग्राम कथाहरूमा कसरी प्रश्नहरू सोध्ने
प्रश्न स्टीकरको अर्को गुण हामीसँग हुनेछन् प्रश्नको साथसाथ उत्तर साझेदारी गर्ने क्षमता नयाँ इन्स्टाग्राम कथामा। त्यसोभए सामग्री जुन हाम्रो प्रश्नले उत्पन्न गर्न सक्छ, अर्को इन्स्टाग्राम स्टोरी बन्न सक्छ र यस्तै विज्ञापन इन्फिनिटम। सामाजिक नेटवर्कमा तिनीहरू राम्रा कुराहरु जान्दछन् जुन लाखौं अनुयायीहरु लाई यो ग्रह मा जस्तै छ; अब त्यहाँ 400०० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले तिनीहरूलाई दैनिक प्रयोग गर्छन्.
पहिलो हो ती मध्ये एक इन्स्टाग्राम कथाहरू सिर्जना गर्नुहोस्.
हामीसँग स्माइली फेस आइकनको साथ शीर्षमा स्टिकरहरू छन्। हामी यसलाई थिच्दछौं।
हामी थिच्दछौं स्टीकरको बारेमा प्रश्नहरूको।
अब हामी केवल प्रश्न सोध्नु पर्छ र जहाँ हामी हाम्रो Instagram कहानी मा जहाँ चाहिन्छ राख्नु पर्छ।
त्यस बखत अनुयायी वा तपाइँको इन्स्टाग्राम कथाहरूको सम्पर्कले यसलाई खोल्दछ, तपाइँले स्टीकर देख्नुहुनेछ जुन प्रतिक्रियामा क्लिक गर्न सकिन्छ। त्यहाँ कुनै उत्तर सीमा छैन, यसको मतलब प्रयोगकर्ताहरू कुनै समय समस्या बिना एक पछि अर्को उत्तर दिन सक्षम हुनेछन्।
र इन्स्टाग्राम कथाहरूमा प्रश्न सुरू गर्नेहरूका लागि कृपया दर्शकहरूको सूचीमा उत्तरहरू हेर्नुहोस्। कुनै पनि उत्तरहरू क्लिक गर्न सिर्जना गर्न सक्षम गर्नुहोस्, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, नयाँ इन्स्टाग्राम कहानी तपाईं के जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको साथ देखा पर्नेछ। यस तरिकाले, सामग्री निरन्तर उत्पन्न गरिनेछ जब सम्म कसैले यो गर्न रोक्दैन।
इन्स्टाग्राम स्टोरीहरूमा प्रश्नहरू सोध्ने यो सुविधाको बारेमा ध्यानमा राख्नको लागि एउटा विवरण यो हो, जबकि तपाईं प्रत्येक उत्तर बनाउने प्रयोगकर्तालाई हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ तपाईंको दर्शक सूचीमा, जब तपाईं यो कथा तपाईंको उत्तरमा साझा गर्नुहुन्छ, तपाईंको सम्पर्कको फोटो र प्रयोगकर्ता नाम देखाइने छैन।
त्यसोभए तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ कसरी इन्स्टाग्राम कथाहरूमा प्रश्नहरू सोध्ने हालका महिनाहरूमा सामाजिक नेटवर्क को सब भन्दा महत्वपूर्ण समाचार को रूप मा। खैर, तपाईंसँग यो एन्ड्रोइडको 52२ संस्करणबाट उपलब्ध छ, त्यसैले गुगल प्ले स्टोरमा राम्रो नजर राख्नुहोस् वा तलको एपीके डाउनलोडमा हेर्नुहोस्।
इन्स्टाग्राम APK डाउनलोड गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » इन्स्टाग्राम कथाहरूमा कसरी प्रश्नहरू सोध्ने: इन्स्टाग्रामको महान नवीनता
Alldocube X, एक ट्याब्लेट २k स्क्रीन, Hifi ध्वनि र Android .2.१
भर्खरको नेटफ्लिक्स अपडेटले हामीलाई सामग्री स्वचालित रूपमा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ